Kongiresi Inotambira Kusarudzwa kwaVaJoe Biden seMutungamiri weAmerica
Nhengo dzedare re Congress dzichigadzirira kuburitswa mudare iri ushure mekunge vairatidzira vapinda nechisimba.
Dare reKongiresi yemuAmerica nemusi weChina mambakwedza rapasisa kusarudzwa kwaVaJoe Biden semutungamiri wenyika mushure mekunge nhengo dzedare iri dzazeya nekutambira mavhoti echikwata chevavhoti, kana kuti Electoral College chakavhota chakamirira matunhu ose emuAmerica.
VaBiden vakawana mavhoti mazana matatu nematanhatu, kana kuti 306, mutungamiri wenyika vave kusiya chigaro, VaDonald Trump vebato reRepublican Party vachiwana mavhoti mazana maviri nemakumi matatu nemaviri, kana kuti 232.
NeChitatu zviuru zvevatsigiri vaVaTrump zvakaratidzira zvakapinda nechisimba mumatare ekongiresi neparamende zvichikanganisa hurongwa hwekupasiswa kwemavhoti uhu.
Kuratidzira uku kwakasiya vanhu vana vafa, vamwe vanodarika makumi mashanu vachisungwa.
Kutambirwa kwekusarudzwa kwaVaBiden kunoitikawo munguva imwechete apo nhengo mbiri dzebato ravo dzakakunda musarudzo yeseneti yaidzokororwa mudunhu reGeorgia kuchiitiko chakapa masimba kuDemocratic Party mudare reseneti.
Dzimwe nhengo dzeparamende dzebato reDemocratic Party dzinonzi dzave kukurudzira kuti VaTrump vabviswe pachigaro temu yavo isati yapera kana kuti impeachment.
VaTrump vasarirwa nemazuva gumi nematatu kuti temu yavo ipere.
VaTrump vaburitsawo mashoko ekuti vachaita kuti kuchinjanwa kwemasimba kuitike mune zvakanaka, kunyange hazvo vachiri kuti sarudzo dzakabiridzirwa.
Rimwe gweta uye vakambovewo mutevedzeri wegurukota rezvemutemo munguva yehurumende yemubatanidzwa, VaObert Gutu, avo vari kuNorth Carolina muno muAmerica, vanoti kongiresi yakaita zvakanaka nekutambira kukunda kwaVaBiden sezvo zvanga zviri pachena kuti VaBiden ndivo vakakunda, asi mhirizhonga yakaitikako yakanganisa chimiro cheAmerica mumaziso epasi rose.
Zvichakadaro, vamwe vatungamiri veyika, dzihurumende, makurukota, vakuru vemasangano pamwe nemimwe mibatanidzwa pasi rose vari kuratidza kushamisika uye vari kushoropodza mhirizhonga yakaitika kudare reparamende remuAmericaI neChitatu. .
Vachinyora padandemutande reTwitter, mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa vati zvichitevera zviitiko zvemhirizhonga yakaitika muAmerica, nyika iyi haina kodzero yekutemera imwe nyika zvirango zveupfumi ichihwanda nekuti iri kukurudzira hutongo hwejekerere.
VaMnanganwa vati gore rapera Vatrump vakawedzera zvirango zvakatemerwa Zimbabwe vachiti yaityora kodzero dzevanhu. Vanoti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvinofanirwa kubviswa.
Vachinyorawo paTwitter, mutungamiri wehurumende yeBritain, VaBorris Johnson vatsanangura chiitiko ichi sechinhu chinoshoresa, vakati America inyika inozivikanwa nekumira nehutongo hwejekerere.
Vakuru vesangano reEuropean Union varatidza rutsigiro rwavo kunaVaBiden. Vachinyorawo paTwitter, mutungamiri weEuropean Union Amai Ursula von der Leyen vati vari kukurudzira kuti pave nekupana kwemasimba murunyararo, vachiti VaBiden ndivo vakakunda musarudzo.
Vamwe vashoropodza mhirizhonga iyi vanosanganisira mukuru weNATO, VaJes Stoltenberg, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muFrance, VaJean-Yves Le Drian pamwe nemubatanidzwa wenyika dziri mumatunhu eAmerica, weOrganization of American States.
Dzimwe nyika dzaiburitsawo mashoko ekukurudzira zvizvarwa zvadzo kuti zvingwarire uye zvisasvika pedyo nemhirizhonga iyi.